यसरी अपहरणमुक्त भए सुरेश केडिया | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » यसरी अपहरणमुक्त भए सुरेश केडिया
यसरी अपहरणमुक्त भए सुरेश केडिया
काठमाडौ जेठ १७ गते । हत्या अभियोगमा भागेर नेपाल आई लुकेर बसेका बेला पक्राउ परेपछि भारत पुर्‍याइएका कुख्यात भारतीय अपराधी बब्लु दुवेको योजनामा उद्योगी सुरेश केडियाको अपहरण भएको खुलेको छ ।
कारागारमा रहेका बब्लुले भारत र नेपालमा रहेका आफ्ना सदस्यमार्फत जेलभित्रै योजना बनाएर केडियाको अपहरण गराएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको हो ।
भारतको मोतिहारी र बेतिया प्रहरीको संयुक्त कारबाहीमा अपहरणको तीन दिनपछि केडिया मोतिहारीको कटवाबाट मुक्त भएका हुन् । केडियाको खोजीका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकारी पनि विहार पुगेका थिए ।
केडिया मुक्त भएसँगै अपहरण भारतको बक्सार जेलमा रहेका बब्लुको योजनामा भएको खुलेको हो । केडियाको खोजीमा खटिएका भारतीय प्रहरीले बब्लुको योजनामा भारतीय र नेपालका व्यक्ति मिलेर उनको अपहरण गरेको पुष्टि गरेका हुन् । दुवेले बब्लु पासवान, रन्जन र सद्दामलगायत ५ जना भारतीयलाई अपहरणमा खटाएका थिए ।
हतियारसहित नेपाल आएका भारतीय आपराधिक समूहले बीआर ०५ ३२३९ नम्बरको सेतो स्कर्पियोमा बिहीबार बाराको वरियारपुरबाट केडियालाई अपहरण गरेका थिए । अपहरणका लागि बब्लुले आफ्ना भाइको संयोजनमा भारत र नेपालका सहयोगीलाई परिचालन गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले जनाए । अपहरणमा संलग्न रहेको आरोपमा भारतीय प्रहरीले रन्जन झालाई पक्राउ गरेको छ । संलग्न अन्य भारतीय फरार छन् । नेपालमा तीन जनाको संलग्नता खुलेको छ ।
तीमध्ये जियालाल यादव र चञ्चल पाण्डे पक्राउ परेका छन् । केडिया बाराको वरियारपुरबाट बिहीबार साँझ घर फर्किने क्रममा पसाहा पुल नजिक उनी चढेको बा१०च ७२४० नम्बरको गाडी रोकेर अपहरणकारीले चालक श्याम उनेश कानुलाई गोली हानेका थिए । चालक घाइते भएपछि उनीहरूले केडियालाई आफ्नो गाडीमा राखेर अपहरण गरेका थिए । अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार केडियाको अपहरणमा संलग्न समूह ३ दिन अगाडि नै नेपाल आएर बसेको थियो । उनीहरूले नेपाली सहयोगीमार्फत उनको दैनिकी निगरानी गरेका थिए ।
विहार प्रहरीले आइतबार साँझ सीमावर्ती सहर रक्सौलमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो कारबाहीबारे जानकारी दिँदै केडियालाई उनको परिवारजनको जिम्मा लगाएको थियो । केडियालाई मुक्त गर्नमा संलग्न मोतिहारीका एसपी जितेन्द्र राना र बेतियाका एसपी विनय कुमारले घटनाबारे जानकारी दिएका थिए ।
भारतीय प्रहरीका अनुसार एक दिन अगाडि केडियाको अपहरणमा प्रयोग भएको गाडी फेला परेको थियो । अपहरणमा प्रयोग गरिएको बीआर ०५ ३२३९ नम्बरको सेतो स्कर्पियो फेला पारेसँगै सुगौली निवासी चालक जावेदलाई पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ परेलगत्तै जावेदले अपहरणमा संलग्न व्यक्तिबारे खुलाएपछि प्रहरीले उक्त समूहका सदस्य झालाई पक्राउ गरेको थियो । झा पक्राउ परेपछि भारतीय प्रहरीले केडियालाई सकुशल मुक्त गराउन सफल भएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बेतियाका एसपी विनय कुमारले अपहरणमा संलग्नहरूको पहिचान भइसकेको र छिटै प्रहरी हिरासतमा आउने जनाए ।
अपहरणकारीले कुटपिट नगरे पनि जतिखेर पनि मुखमा कालोपट्टी बाँधेर राख्ने गरेको केडियाले बताए । ‘बेहोस भएका बेला मात्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्थे,’ उनले भने, ‘पानी खानेबित्तिकै बेहोस हुन्थें । तीन दिनदेखि रोटीसमेत खान पाइनँ ।’
केडियाको अपहरणपछि उनलाई मुक्त गर्न १० करोड भारतीय रुपैयाँ फिरौती मागिएको भनिए पनि उनले फिरौती नबुझाएको प्रहरी र परिवारले जनाए ।
‘भारतीय प्रहरीको दबाबमा अपहरणकारीबाट मुक्त गरेको हो,’ केडियाको खोजीमा भारतीय प्रहरीसँग समन्वय गरेका ब्युरोका प्रमुख डीआईजी नवराज सिलवालले दाबी गरे, ‘उनी फिरौती नबुझाई मुक्त भएका हुन् ।’ केडियाका भाइ प्रदीप केडियाले पनि फिरौती माग्न फोन नआएको दाबी गर्दै कसैलाई पनि पैसा नबुझाइएको जनाए ।
सद्भावनाका सांसद विमल केडियाका भाइ सुरेशको अपहरणपछि उनको खोजीका लागी भारतीय दूतावासमार्फत पहल गरिएको थियो । वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीले विहारका मुख्यमन्त्री नितीश कुमारको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
गुन तिरे विनयले
बेतियाका एसपी विनय कुमार यस अगाडि मोतिहारीका प्रमुख थिए । उनकै कार्यकालमा नेपाल प्रहरी र भारतीय प्रहरीबीचको समन्वयमा धेरै अपराधी आदानप्रदान भएका थिए । भारत विहारका मोस्ट वान्टेड बब्लु नेपालमा पक्राउ परेपछि यिनै विनय कुमारले उनलाई लगेका थिए ।
पोखरामा लुकेर बसेका इन्डिन मुज्जाहिद्दिनका सदस्य याशिन भटकललाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भारत पठाउँदा त्यसको जस यिनै विनयले पाएका थिए । त्यसबापत उनले राष्ट्रिय सम्मानसमेत पाए ।
‘भारतमा अपराध गरी नेपालमा लुकेका भारतीय अपराधीलाई पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीले धेरै सहयोग गरेको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा विनयले भने, ‘यो हाम्रा लागि नेपाल प्रहरीले काम गरेर देखाउने पहिलो मौका थियो ।’
सीमाका सुरक्षाकर्मीको कमजोरी ?
तेलकुवा र कबही गोठमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट रिच पोस्ट र प्रहरीको चौकी छ । गोली चलाइएको स्थानबाट भारतीय सीमा करिब १४ किलोमिटर दूरीमा छ । त्यहाँबाट भारत प्रवेश गर्न प्रहरी र सशस्त्रको चौकी पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सुरक्षाकर्मीले जाँचमा लापरबाही नगरेका भए भारतीय गाडी सजिलै सिमाना कट्ने थिएन । ‘नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मुख्य जिम्मेवारी नै खानतलासी गर्नु हो,’ एक स्थानीयले भने, अपहरित व्यक्ति र हतियारसहित अपहरणकारी भारतीय गाडीमा सजिलै भारत गएको देखिएको छ ।’
सीमावर्ती विहारमा लालुप्रसाद यादवको राष्ट्रिय जनता दल सत्तामा फर्किएलगत्तै हत्या, अपहरण र फिरौती सुरु भएका छन् । इन्जिनियर, ठेकेदार, व्यापारी अपराधीको निसानामा परेका छन् । विहारमा अपराध बढ्न थालेपछि उताका अपराधीले आर्थिक नगरीका उद्योगीरव्यवसायीलाई टार्गेट गर्न सुरु गरेका छन् ।
केडियाको अपहरणलगत्तै उद्योगीरव्यवसायीलाई अनावश्यक फोन आउन सुरु भइसकेको थियो । पछिल्लो केही वर्षयता सुरक्षित अनुभव गरेका उद्योगीरव्यापारीले निजी सुरक्षा गार्ड ९पीएसओ० समेत फिर्ता गरेका थिए । ‘बिहान र साँझ घरबाहिर हिँडडुल गर्न थालेका थियौं,’ एक उद्योगीले भने, ‘मोबाइलमा सेभ नभएका नम्बर पनि निर्धक्क उठाउँथ्यौं ।’
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक वैद्यले आर्थिक नगरीमा सरकारले विशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ, त्यहाँ अपराधी बढछन्,’ उनले भने, ‘सीमावर्ती क्षेत्रका प्रहरीको संयुक्त टोली बनाउन आवश्यक छ ।’
को हुन् बब्लु दुवे ?
भारत विहारको पूर्वी र पश्चिमी चम्पारणमा ३६ जनाको हत्या अभियोग लागेका फरार अपराधी बब्लु दुवेलाई नारायणी अञ्चल प्रहरीले २०७० जेठ १५ गते काठमाडौंमा पक्राउ गरेको थियो । दुवे आफैंले ६ वटा हत्या गरेको भारतीय प्रहरीले जनाएको थियो ।
त्यसअघि कर्तव्य ज्यान, बैंक लुटपाट, डकैतीलगायत विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा पक्राउ परेका दुवे भारतीय जेलमा १० वर्ष सजाय काटिसकेका थिए । सन् २००१ मा गाउँकै शिवशंकर दुवेलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी मार्ने प्रयास गर्दा दुवे पहिलो पटक जेल गएका थिए ।
भारतमा मोस्ट वान्टेड भएपछि दुवे ०६९ कात्तिकदेखि नेपाललाई आश्रयस्थल बनाएका थिए । दुवेमाथि विहार प्रहरीले दुई लाख भारु इनाम घोषणा गरेको थियो ।
विहार प्रहरीको आग्रहमा नारायणी अञ्चल प्रहरी, वीरगन्जका तत्कालीन प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको टोलीले काठमाडौंको सीतापाइलास्थित सीताहोम हाउजिङबाट दुवेलाई प्रक्राउ गरेको थियो । खनाल नेतृत्वको टोलीले उनलाई हाउजिङको तीनतल्ले भवनको दोस्रो तल्लाबाट राति १ बजे नियन्त्रणमा लिएर वीरगन्ज लगेको थियो ।
नेपालमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नता नदेखिएका दुवेलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर भारतीय समकक्षीलाई जिम्मा लगाइएको थियो । मोतिहारी सिसुवाखडार थाना कल्याणपुरका ३३ वर्षीय दुवे हाल विहारको बक्सर जेलमा छन् । जेलमा कैद भुक्तान गरिरहेका भए पनि उनी मोबाइलमार्फत आफ्ना सदस्यसँग निरन्तर सम्पर्कमै हुन्छन् भनि कान्तिपुरमा समाचार छ ।